Ngabe udokotela wami udinga ukwazi ngezimiso zami zocansi noma ubunikazi bami? – Help Center
Kumele bahlolwe kangakanani ubungako begciwane egazini, abantu abanegciwane lesandulela ngculazi ?
Kuyini uma sithi: Ayitholakali = Ayikwazi ukungena (A = A)?
Ngingathola yini i-HIV uma ngimunca isitho sangasese?
Ngabe udokotela wami udinga ukwazi ngezimiso zami zocansi noma ubunikazi bami?
Kumele ngiye kangaki ukuyololongwa ngentsolongwane kagawulayo kanye nezinye izifo zocansi?
Ngingakuthola kuphi ukuhlolwa kwe-HIV / STDs?
Impendulo yalo mbuzo inzima. Kwabanye abantu, kungase kungabi ku-phephile ukudalula kudokotela wabo, ikakhulu emazweni lapho i-LGBT engekho emthethweni noma ubumfihlo phakathi kukadokotela nesiguli akuqinisekisiwe ngumthetho.
Kodwa-ke, uma sikwazi ukwethemba abahlinzeki bethu bezokwelapha, bazokwazi ukusinakekela kangcono. Ukukhuluma nabo mayelana nobunikazi bakho, ukuziphatha ngokocansi, nezinhlobo zobulili onakho kuzobavumela ukuba benze ukuhlolwa okuqondile okudingayo ukuze kugcine unempilo.
Khumbula ukuthi ufanelwe nesipiliyoni ehhovisi likadokotela elingaphephile kodwa futhi likhululekile. Uma udokotela ezama ukukutshela ukuthi ukuziphatha kwakho ngokocansi, ukubonakala kobulili, noma ubulili obunayo akulungile, mtshele ngokuzithoba ukuthi ungathanda ukukhuluma kuphela ngemithi ngenkathi uvakashele.
Hlola le vidiyo eyodwa ngomzuzu e-suka e-Greater Than AIDS ukuze uthole okuningi. (Xhumana nomthombo wezinhlelo zesiNgisi)